Buy Magic Speaker (15,500Ks) in ကမာရွတ် on ipivi.com
Bluetooth မလို Wifi မလို
ဖုန်းရဲ. နဂို အသံကို ထပ်မံ ချဲ.နိုင်မယ့်
Magic Speaker လေးကို Rocket မှာ ဝယ်လို. ရပါပြီ။
ဖုန်းနဲ. သင်ခန်းစာများ လေ့လာသူများ
သီချင်း အမြဲ နားထောင်ချင်သူများ
အသံကျယ်ကျယ် အခန်းထဲ ဖွင့်ချင်သူများအတွက်
ဈေးနှုန်း – 15500 kyats
အမည်: Magic Speaker